Lix Dariiqo oo Aad Falanqeyn Karti Kartid SEO-kaaga Oo U Adeegso Macluumaadkaas Si Aad Ugu Sarraysatid Google
Iyada oo shantii natiijadood ee ugu horreeyay ee dabiiciga ahi amro ku dhawaad boqolkiiba 70 ee gujimaha Google. Waa lagama maarmaan in la helo fahan buuxa oo ku saabsan falanqaynta SEO. In kasta oo adeegsiga aaladda Semalt ay kaa caawin doonto inaad halkaas gaarto, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa aad raadineyso iyo sida ay kuu anfacayso.
Hoos, waxaan ka soo gudbin doonaa lix waxyaabood oo aad ugu isticmaali karto fahamkaaga SEO. Markaad fahanto mawduuca, waxaad ku riixi kartaa degelkaaga bartilmaameedka halka raadinta ay isku caawin karto lafteeda. Ma aha liis loo wada dhan yahay, laakiin waxay ku siinaysaa faham adag oo ku saabsan sida loo bilaabo.
Beddel tilmaamahaaga meta.
Eeg waxyaabaha tartamayaaga.
Hubi ereyada furaha ee aad isticmaaleyso.
Adeegso falanqiyaha bogga bilaashka ah ee Semalt.
Maalgeli ololaha SEO.
Tan iyo maalmihii hore ee wax soo saarka, mawduuca wuxuu had iyo jeer ilaaliyaa heer sare. Adeegsiga cinwaanadaada H2 iyo H3 ayaa ku siinaya qaab dabiici ah oo la akhrin karo. Ku firdhi meelaha ku habboon si loo hubiyo in akhrinta la raadiyo. Hawshani waxay akhristayaasha ku dhiirrigalinaysaa inay sii joogaan, taasoo ka dhigaysa degel websaydh meel sare xagga matoorada raadinta
Qaabkaan kaligiis saameyn badan kuma yeelan doono SEO-gaaga. Laakiin marka la isku daro tan iyo ereyada muhiimka ah ee habboon, akhristayaasha waxay aad ugu dhowdahay inay ku helaan oo kugu dhegaan. Waxay u badan tahay inaad sii wadato raadinta websaydhka haddii ay fududahay akhriska.
Markaad wax ka beddeleyso madaxadaada, iskuday inaad ka fekerto bartaada blog sida buug. H1 wuxuu u baahan yahay inuu noqdo cinwaankaaga, waana inuu u sheegaa akhristayaasha waxay rabaan. Cinwaan hoosaadka, waxaan hayaa laba talo.
Xulashada koowaad waa inaad kudarto qeyb-hoosaadkaaga iyadoo ah faa iido laga xalliyay dhamaadka cinwaankaaga. Xulashada labaad ayaa ah in la bixiyo horudhac ay la socdaan qeyb hoosaad hoosaadyo oo leh sharaxaad faahfaahsan oo ka hadlaya mawduuca. Xulashada labaad ayaa akhriska u fududaynaysa fekerka halka xulashada koowaad ay ku habboon tahay halka ugu sarreysa. Ma jiro hal qaab oo sax ah oo tan lagu sameeyo, markaa ku ciyaar agagaarka ilaa aad ka hesho wax shaqeynaya.
Wax Ka Beddel Tilmaantaada Meta
Mid ka mid ah qaybaha ugu badan ee aan la xaqiijin ee websaydhkaaga ayaa laga yaabaa inay tahay tilmaanta astaamaha. Dad badan ayaan ka warqabin in tilmaan-bixin muunad uu ku yaal bog kasta. Markaad tan haysatid, waxaad fursad weyn u leedahay hal bog ama darajo maqaal.
Boggan wuxuu dadka u horseedi doonaa qeybaha kale ee websaydhkaaga, halkaas oo ay uga faa'iideysan karaan howlahaaga. Google, sharraxaadda meta waa ka hooseysaa bogga raadinta ereyga raadinta. Hoos ka eeg tusaale muuqaal ah.
Marka laga eego aragtida SEO, gelinta ereyada muhiimka ah ee kujira sharaxaadda meta waa hab fiican oo lagu qiimeeyo matoorada raadinta. Xitaa haddii ereyada ku jira tilmaantan aysan caawinaynin SEO-gaaga, waxay siin doontaa akhristaha fikrad waxa la filan karo ka hor intaadan gujin. Haysashada sharaxaad tusaaleedka waa fursad lumis.
Markaad abuuraysid sharaxaadahaaga meta, isku day inaad arrimaha ka dhigto kuwo gaagaaban oo toosan. U yeer wicitaan ficil (CTA) oo dadka ugu sheegaya waxa la sameeyo sharax ka bixintan. Habka caadiga ahi waa inuu ka hooseeyo 150 xaraf.
Eeg Tusmada Tartamayaashaada
Tixgeli furayaasha, nuxurka, iyo qaabka marka aad fiirineyso waxa ku jira. Fikradda ma aha in la xado qaabkooda. Hadafkaagu wuxuu u baahan yahay inuu sii fiicnaado waxa ku jira.
Tusaale ahaan, haddii aad tahay wakiil suuq geyn ah oo abuuraya waxa ku jira shirkad yar oo kabo ah, waxaad u baahan doontaa inaad fiirsato waxa dadka xaaladaadu ku sugan tahay ay sameynayaan. Waxaad jeclaan laheyd inaad abuurto waxa ku qanacsan dhageystayaashaada bartilmaameedka ah. Tusaale ahaan, Zappos waxay bartilmaameedsataa dhalinyarada qaan gaarka ah ee carrabka ku adkeysa qaabka iyo tayada.
Haddii shirkadda kabahaagu ay rabto inay tartan gasho, yoolka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa inuu gaaro shirkad sida Zappos ah. Si kastaba ha noqotee, markii aad tahay biloow, waa inaad raadsataa shirkado kale oo sameynaya isla wixii adiga oo kale ah isla markaana soo saaraya waxyaabo horumar ka keenaya wixii horey u soo jiray. Tusaale ahaan, haddii kabaha ciriiriga sare ah ay ku soo laabtaan qaab ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad bartilmaameedsato ereyga “kabaha sare-sarreeya” ereyga.
Waxaad qoreysaa qoraalo badan oo xuduuda laxiriira mawduuca oo ay kujiraan tilmaamo kusaabsan sida saxda ah ee loo nadiifiyo, nooca surwaalada ay la socdaan, shaatiyada ay wataan, iyo sida looga dhigo mid waligood sii jiraya. Hadaad labadiinaba wada qortaan liistada, howshaada waxay noqon laheyd inaad sameyso cinwaan iyo waxyaabo kafiican kooda. Haddii aad fiirineyso tirada, seddexdooda waxay u baahan yihiin inay la mid ahaadaan lix.
Hubi ereyada furaha ah ee aad isticmaaleyso
Mawduucani waa wax sii kordhinaya maqaalkayagii hore, laakiin ereyada khaldan ee cinwaankaaga iyo waxa ku jira ayaa laga yaabaa inay soo jiitaan dad qaldan. Adeegsiga tusaalaha ka hor, haddii aad soo saareyso boggag internet oo bartilmaameedsanaya kabaha, ma dooneysid qof raadinaya maaliyado. Ku beddelashada ereyga "polyester jilicsan" ma caawin doono shirkadda kabahaaga si aad u badan.
Sidoo kale, ereyada furaha ee aad isticmaaleyso ayaa laga yaabaa inay aad u tartamaan. Shirkadaha yaryar, waxay u baahnaan karaan inay bartilmaameedsadaan ereyada muhiimka ah ee aan yarayn. Waxba tari mayso isku dayga iyo darajada "kabo cusub" markii 300 kun oo shirkado kale ay rabaan inay sidaas oo kale sameeyaan. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha hoos ku xusan waa magacyo caan ah, sumcad lagu kalsoon yahay.
Caado xun oo aan u arko maalmahan waa “keyword keyword.” Walxaha keyword ayaa iskudayaya inay xiraan ereyo badan oo la raadin karo oo kujira baloog si ay uga dhigaan darajada mashiinka Google. Dhibaatada istiraatiijiyadani waa in AI-da Google ay u aqoonsato arrintan. Kuwa isku dayaa walxaha muhiimka ah ee erayga ma u muuqan doonaan kuwo sarreeya.
Si aad u hesho fikrad guud oo wanaagsan oo ah sida keywords u shaqeeyaan, waxaad si fudud u isticmaali kartaa google. Adigoo raadinaya erey aad u maleynayso inuu dadka ku soo kordhin doono websaydhkaaga, waxaad ka heli kartaa waxa websaydhka kale u taagan yihiin eraygaas. Haddii websaydhadaas ay kujiraan meela aad wadaaga, markaa waxaad leedahay ereyga saxda ah. Markaad waxyaabaha ku darto ereyga muhiimka ah, waad yareyn kartaa mawduuca.
Adeegso Falanqeeyaha Websaydhada bilaashka ah ee Semalt
Websaydhyada, marka ugu horeysa ee horumarka la sameeyo, dabiici ahaan waxay leeyihiin dhowr arrimood oo kala duwan. Waxay yeelan karaan xiriiriye jaban, wareejinno aad u tiro badan, kor u qaadis liita, oo gaabis ah in la rarro. Falanqeeyaha Webka bilaashka ah ee Semalt wuxuu raadiyaa inuu aqoonsado arrimahan.
Qalabka Falanqaynta Websaydhadu wuxuu ku siinayaa aaladaha loo baahan yahay in lagu biiriyo welwel badan oo aan hore u soo sheegnay, laakiin dhammaantood waa hal xirmo. Astaantan, uma baahnid inaad lacag bixiso si aad fikrad uga hesho halka ay degmadu ka taagan tahay. Si kastaba ha noqotee, kuwa aan xirfadleyaasha ahayn waa inay tixgeliyaan olole SEO ah.
Iyada oo la adeegsanayo aaladda saxda ah ee falanqaynta, waxaad awood u yeelan doontaa inaad fahanto waxa gujisyada boggaaga ay u horseedaan isu beddelasho iyo waxa ereyga muhiimka ahi ay u kordhiyaan taraafikada boggaaga. In kasta oo labaduba ay waxtar u leeyihiin sababo kala duwan, haddii himiladaada ololahaaga SEO uu yahay in la kordhiyo iibka, ma dooneysid erey furaha soo jiidan kara booqdayaasha. Fikraddan waxay noo keenaysaa mawduucayaga soo socda, oo dooranaya maalgashi olole kaa caawin doona inaad koro.
Maalgeli ololaha SEO
Waxaa jira ilo kala duwan oo laga heli karo kuwaas oo kaa caawin doona inaad baratid aasaaska SEO . Laakiin saacadaha aan la tirin karin ee ay qaadan karto in la baaro mowduuca ayaa murugsan. Gaar ahaan waa run haddii aad leedahay ganacsi yar oo u baahan inuu macmiil soo jeediyo. Ma diirada saareysid sameynta iib haddii aad waqtigaas ku bixiso baarista sida websaydhkaagu u qiimeyn karo.
Markaad ku darto aqoontaada maadada iyo kooxda khubarada ee Semalt, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dariiqa tooska ah ee guusha. Sidoo kale, aqoontani waxay kaa caawin kartaa inaad sii waddo faa iidada ay kugu siisay Semalt. Shaqadeenu waxay u timaadaa inay hubiso in ereyada furaha ee aad dooratay ay ka dhasheen nidaam shaqeynaya. Dabcan, ololahayagu wuxuu la imanayaa sidoo kale ereyo muhiim ah oo la soo jeediyay.
Waad kala dooran kartaa inta u dhexeysa ololeyaal badan oo kuxiran cabirka boggaaga iyo miisaaniyaddaada. Hubso inaad dib u eegto faahfaahinta AutoSEO iyo FullSEO si loo hubiyo inaan la kulanno baahiyahaaga. Marka la eego cabirka iyo tirakoobka websaydhkaaga, kooxda khubarada ee Semalt ayaa u qalma inay kaa caawiyaan inaad gaarto go'aanka ugu wanaagsan ee maaliyadeed.
Sida loo fahmo sida loo falanqeeyo SEO ayaa kaa caawin kara inaad ku guuleysato Google Top
Markaad leedahay faham adag oo ku saabsan falanqaynta SEO, waxaad awood u yeelan doontaa inaad naftaada gacanta u siiso darajo sare google. Dabcan, waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha la aqrin karo waa muhiim tan tan. Cinwaannada ku habboon oo leh ereyada muhiimka ah ee la xiriira ma aha oo keliya inay caawiyaan SEO-gaaga laakiin waxay hubinayaan in akhristaha uu la socon karo.
Sidoo kale, fahmitaanka isticmaalka tilmaanta meta ayaa kaa caawin doonta soo qaadashada kuwa laga yaabo inay guud ahaan ka shakiyaan degelkaaga. Markaad CTA siiso sharaxaadda meta, waxay ogaan doonaan waxa laga filayo maqaalkaaga. Akhristayaasha waxaa dhiirigeliya kuwa iyagu kalsoonidooda dabiiciga ah ku leh ereyadooda.
Furayaasha ereyadu waa kuwo la mid ah akhrinta markay tahay SEO. Adigoo adeegsanaya qalabka 'falanqaynta' bilaashka ah ee Semalt, waxaad ka heli kartaa fikrad wanaagsan halka aad ka bilaabi lahayd. Markaad ballaadhiso tan si loogu daro olole SEO ah, waxaad u beddelan kartaa fahamkan natiijooyin la cabbiri karo. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan aaladahaan, samee koonto maanta.